Ajụjụ - Jade Technology Co., Ltd
Ajụjụ maka Company
Olee otú ị na-hụ na àgwà nke gị na ngwaahịa?
Anyị ike a zuru okè ọkọnọ yinye mejupụtara nditịm filtrated magburu onwe mgbere na onye ọ bụla ngwaahịa ga-anwale tupu ịhapụ anyị factory.
Ì nwere asambodo nke dị mkpa na anyị ahịa?
Ee, ihe niile anyị na ngwaahịa ndị ETL / CETL / OA / RoHS / CEC certificated. Anyị nwekwara ike ide maka pụrụ iche akwụkwọ na a chọrọ gị ahịa.
Ị na-enye samples? ọ bụ free ma ọ bụ?
N'omume dị maka gị, ma ga-akwụ ụgwọ. Daalụ maka gị obiọma nghọta.
Olee banyere okwu nke ịkwụ ụgwọ?
T / T na ọtụtụ na-atụ aro, Paypal / Western Union / LC na ndị ọzọ okwu nke ịkwụ ụgwọ na-na-anabata
Ị pụrụ ime OEM anyị?
Ee, anyị na-enye na OEM, ODM, OBM izute iche iche choro nke azụmahịa gị.
Olee otú gị akwụkwọ ikike?
Anyị na-enye na 12 ọnwa akwụkwọ ikike ebe ibu-ahapụ anyị factory. Anyị na-enye na ogologo oge ahịa na mgbe-ire support, ọkachamara engineer ga-enyere ka nwere ike ikwu kasị mma na ngwaahịa mgbe amụ gị ahịa 'chọrọ, ma hazie ihe ngwọta maka ihe ọ bụla nke gị pụrụ iche ngwa
Ajụjụ maka Products
Gịnị mere m mgbapụta ọrụ na a oké ụzụ na moto-nnọọ na-ekpo ọkụ?
Na-emekarị na ọ na-mere site-eme ihe ike ụgbọ njem, na aro bents na rotor rubs na stator mgbe moto na-agba ọsọ. Biko lelee ma ọ bụrụ na ngwugwu bụ na mma mgbe mgbapụta esịmde ị.
Gịnị mere m mgbapụta adọta obere mmiri?
Ọ bụrụ na mgbapụta na-emekwa ka a iju mkpọtụ mgbe o siri ike na-adọta mmiri, biko ebukọtala mgbapụta na-elele ma ọ bụrụ na ndị impeller na-rapaara nke nta nkume. Nke a nwere ike ime eme na ọhụrụ wuru ọdọ mmiri mgbe ị wụnye mgbapụta enweghị ọcha si obere okwute. Ọ bụrụ na ndị e nweghị iju mkpọtụ, biko ọ bụrụ na ị wụnye ya nke ọma, nke a nwere ike ime mgbe gị agụụ ngwá ada ada.
My mgbapụta moto nsure, olee otú ndị na-eme?
Biko lelee ma ọ bụrụ na ị na-ezighị ezi wired na voltaji na a sọrọ voltaji mgbapụta.
Kpọọ anyị ugbu a: +86 574 28525988